Cristiano Ronaldo Oo U Xaqiijiyay Kabtan Sergio Ramos Inuu Doonayo Inuu Isaga Tago Real Madrid - Laacib.net
Cristiano Ronaldo Oo U Xaqiijiyay Kabtan Sergio Ramos Inuu Doonayo Inuu Isaga Tago Real Madrid
Cristiano Ronaldo ayaa u xaqiijiyay kabtanka kooxda Sergio Ramos inuu doonayo inuu isaga tago Real Madrid sida lagu sheegay barnaamijka Golazo de Gol.
Barnaamijkaan oo ka baxa hilinka Gol TV ayaa lagu sheegay in Cristiano Ronaldo uu taleefanka kala hadlay Ramos ka dib markii la sheegay inuu gaaray go’aan aan ka soo laabasho laheyd oo uu kaga tagayo Spain.
Sida lagu sheegay Golazo de Gol, Ramos ayaa weydiiyay Cristiano Ronaldo haddii ay run tahay wararka xanta ee sheegaya bixitaankiisa, waxaana uu kabtanka Portugal ku jawaabay inay run yihiin.
Barnaamijka ayaa sidoo kale sheegay in wakiilka Cristiano Ronaldo ninka lagu magacaabo Jorge Mendes inuu xiriir la sameeyay madaxweynaha Real Madrid Florentino Perez si uu ugu wargeliyo in Ronaldo uu doonayo inuu ka tago Bernabeyu xagaagan.
Cristiano Ronaldo oo haatan ku maqan xulkiisa Portugal ee ciyaaraya koobka Qaaradaha ayaa la sheegay inuu go’aan ku gaaray inuu ka tago Spain ka dib markii uu ka carooday dacwada qiyaanada canshuur ee loo heysto.
Kooxaha Manchester United iyo Paris Saint-Germain ayaa loolan adag ugu jira inay helaan xiddiga reer Portugal iyadoo Real Madrid ay ku adkeysaneyso inuusan iib aheyn iyadoo qandaraaskiisa lagu burburin karo hal bilyan yuro.